Tsy azoko atao ve ny mametraka ny teny miafiko ao amin'ny application Terminal | Avy amin'ny mac aho
Terminal Izy io dia rindranasa izay ampidirin'ny rafi-pikarohanay Mac rehetra. Amin'ny ankapobeny, mpampiasa "an-tongotra" tsy fantany izy, na rehefa lazainay aminy hiara-miasa aminy aza izy, dia mahatsapa fatra iray izy raha mikasika zavatra izay tsy tokony ary tsy mahalala ny fomba hiverenana amin'ny teboka teo aloha. Izy io dia iray amin'ireo fampiharana tsotra indrindra ary azontsika atao ny mamaritra azy io ho "marikivy" nefa ny fampiasa omen'ny fampiharana antsika dia tsy tambo isaina. Raha nanaitra ny fahaliananao ianao, hanombohana anao dia afaka mijery ilay lahatsoratra navoakan'ny mpiara-miasa aminay: Ahoana ny fomba fitanisana ireo baikon'ny terminal rehetra, na mahita fampiharana tsy tambo isaina ao amin'ny tranokalanay.
Rehefa tafiditra ao anatin'ny Terminal izahay, afaka manatanteraka baiko isika mba hahafahan'ny rafitra manao hetsika anatiny. Ohatra: cache mazava, diovy ny RAM, esory ny lesoka izay manakana ny fizotran-javatra tsy hihazakazaka miadana, ankoatry ny maro hafa.
Mba hanatanterahana ny iray amin'ireo hetsika ireo dia ilaina ny miditra amin'ireo sosona amin'ny rafitra mitaky ampidiro ny tenimiafinay rafitra. Ara-dalàna izany, satria ny mpandraharaha Apple dia maniry ny hahazo antoka ny zavatra ataontsika ary manakana ny mpampiasa iray hafa an'ny Mac tsy hikitika azy tsy nahy.
Noho izany, hatramin'izao, rehefa mangataka "teny miafina" izy dia nosoratana ny fampahalalana ary hitanay fa misy teboka ny teny miafina. Etsy ankilany, amin'ny fanavaozana farany ny rafitra, rehefa miseho ny teny miafina ary manomboka manoratra ny tenimiafintsika isika dia tsy miseho ireo teboka, ary manome ny fahatsapana fa voasakana aza ilay programa. Tsy toy izany, dieny izao dia tsy mamerina ny tsindry bokotra tsirairay an'ny bokotra fanalahidin'ny tenimiafina. Aorian'ny fanerena hiditra dia fantatry ny rafitra ary manomboka ny fizotrany nangatahina.
Tsy haiko ny antony anaovana an'io, fa tsy maintsy lazaiko fa mandraka ankehitriny ny fidirana amin'ny teny miafina, dia mihetsika tahaka ny fanaony hatramin'izao. Ny famerenana ny solosaina dia tsy hahatonga antsika hiverina amin'ny fomba teo aloha ihany koa.
Manantena izahay fa hanjaka amin'ity fanovana ity i Apple, izay azo antoka fa hanana antony na fanazavana izay tsy fantatsika hatreto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Maninona aho no tsy afaka mametraka ny teny miafiko ao amin'ny app Terminal
Ny antony heveriko fa iray ihany rehefa manisy teny miafina amin'ny fitaovana iOS aho dia tsy maneno ny "tsindry" amin'ny klavier mba hialana amin'ny fanomezana torolàlana momba ny isan'ny tarehintsoratra ananany.
Mamaly an'i Inigo
Spartacus dia hoy izy:
Ara-dalàna izany amin'ny ankamaroan'ny terminal misy ankehitriny toy ny amin'ny linux na iTerm ho an'ny mac (bash, zsh). Ho an'ny fiarovana izany: aza aseho ny haben'ny tenimiafina eo amin'ny efijery.
Mamaly an'i Spartacus
Ny lalao F1 2016 dia hamely ny Mac App Store amin'ity alakamisy ity